इरानद्वारा तेल बजारलाई अस्थिर बनाएको भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपतिको आलोचना
तेहरान, इरान, २३ असार : इरानले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पेट्रोलियम बजारलाई अस्थिर बनाएको आरोप लगाएको छ ।
“आजभोलि तेलको मूल्य ट्रम्पको व्यवहारमा आश्रित बनेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
जानगनेहले भन्नुभयो, “हरेक दिन ट्रम्पले तेल बजारलाई प्रभावित पार्नेगरी नयाँ सन्देश सम्प्रेषण गर्ने गर्नुभएको छ । उहाँले ओपेक सदस्य राष्ट्रलाई अनादर हुनेगरी आदेश दिने गर्नुभएको छ वा उनीहरूलाई तेल उत्पादन दर बढाउन निर्देशन दिने गर्नुभएको छ ।”
“यिनीहरू ओपेक सदस्य राष्ट्रका जनता तथा राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ता विपरित अभिव्यक्ति हुन् र यसले तेलको मुल्यलाई पनि अस्थिर बनाउँछ,” उहाँले थप्नुभयो ।
पछिल्लो पटक गत बुधबार संप्रेषित ट्वीटमा ट्रम्पले ग्यासको मूल्य बढेको र यसलाई नियन्त्रणमा राख्न ओपेकको एकाधिकारलाई जिम्मेवार मान्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
अमेरिकाले इरानबाहेकका ओपेक सदस्य खासगरी साउदी अरबलाई तेल उत्पादन बढाउन पटकपटक आग्रह गरेको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपतिका पछिल्ला ट्वीट सन्देशमा अमेरिकाको मुख्य सहयोगी मानिने खाडी मुलुक साउदी अरबका राजाले उत्पादन बढाउन मञ्जुर देखिएको बताउनुभएको थियो ।
अमेरिकाले इरानसँगको आणविक सम्झौताबाट फिर्ता भएको घोषणा गरिसकेको छ भने इरान विरुद्ध आर्थिक नाकावन्दीको पनि घोषणा गरेको छ । (रासस÷एएफपी)
प्रकाशित : शनिबार, असार २३, २०७५१९:३८
ट्रम्पका विरोधी मेक्सिकोमा राष्ट्रपति, बन्ला त सीमामा पर्खाल ?
२० जना सांसद अयोग्य ठहर गर्दै पद खारेजको सिफारिस
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको निमन्त्रणामा अष्ट्रियाली विदेशमन्त्री नेपाल आउँदै !
दशैँ नजिकिँदै गर्दा मासुको माग बढ्यो !
घाँस न पात तर गाईबाट मासिक एक लाख
मध्यरातमा रणविरलाई भिडियो कल गरेर यस्तो के भनिन त प्रियंका चोपडांले